Chunyin သည် Zhongtong Express နှင့် Yuantong Express တို့ နှင့်ပူးပေါင်း သည် - Pandaily
Chunyin သည် Zhongtong Express နှင့် Yuantong Express တို့ နှင့်ပူးပေါင်း သည်
Categories: Industry ကိုPandaily ဇန်နဝါရီ 12, 2022 ဇန်နဝါရီ 12, 2022 မှာ Posted
နည်းပညာ ဂြိုဟ်ထိပ်တန်း ဗီဒီယို အတို ဝေမျှ ရေး ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chuntyin ဟာ မကြာသေးခင်က “ Yin Zunda” လို့ခေါ်တဲ့ Courier Service တစ်ခုကို စမ်းသပ် ခဲ့တယ်လို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ကုန် အသစ် ၏ရည်ရွယ်ချက် မှာ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ် ရန် နံပါတ် များ၊ တစ်အိမ် မှ တစ်အိမ် ပို့ဆောင် ခြင်းနှင့် ရိုးရာ က ှကျ ပေးပို့ ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု တွင် ၀ န်ဆောင်မှု ညံ့ဖျင်း ခြင်း ပြ the နာများကို ဖြေရှင်းရန် ဖြစ်သည်။
ပလက်ဖောင်း သည် ကုန်သည် ၏အ ခွင့် အရေး နှင့်အ ကျိုး စီးပွား များကိုဖော်ပြထားသည်။ တစ်အိမ် မှ တစ်အိမ် ပို့ဆောင် ခြင်း၊ ဦး စားပေး ဖြန့်ဝေ ခြင်း၊ ဖောက်သည် တိုင်ကြား ချက် လျော်ကြေး ၊ ဦး စားပေး အထုပ် ပို့ ခြင်း၊ ၁-၁ ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှု စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ပြန်လာ နှုန်း ကိုလျှော့ချ ရန်နှင့် သုံးစွဲသူများ ပြန်လည် ၀ ယ်ယူ မှုနှုန်း ကိုမြှင့်တင် ရန်ကူညီ သည်။
လက်ရှိ တွင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှု ကိုထောက်ပံ့ သော Courier ကုမ္ပဏီ များတွင် Zhongtong Express, Yuantong Express နှင့် Yunda Express တို့ပါဝင်သည်။ နောင် တွင် ကုမ္ပဏီ များပိုမို ပါ ၀ င် လာ မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ Yinzunda ၀ န်ဆောင် မှုက “ ကုန်ပစ္စည်း ပေးပို့ သူသည် ကုန်ပစ္စည်း ကို ဖောက်သည် ၏အိမ် တံခါးဝ သို့ပို့ဆောင် ပေးမည်ဟု ကတိ ပေးသည်။ သုံးစွဲ သူသည် တတိယ ပါတီ ပလက်ဖောင်း မှ လက်ခံ ရန် တောင်း ဆိုသည့် ကိစ္စ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ ၏လိပ်စာ သည် ဝေးလံ လွန်း ခြင်း မှလွဲ၍ ။”
Planet of Technology ၏အဆိုအရ Bytedance Breaking Sound သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက် အစောပိုင်းတွင် အိမ် သို့ပို့ဆောင် ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု ကိုစတင်ခဲ့သည်။
Courier နှုန်း သည်တစ် ဦး လျှင် ၀. ၈ ယွမ် (ဒေါ်လာ ၀. ၁၃) ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကုမ္ပဏီသည် ပထမဆုံး စာပို့ ရန်ကြိုးပမ်း မှုအတွက် သာ ငွေတောင်းခံ သည်။ Courier ကုမ္ပဏီသည် ကတိ ထားသည့် ၀ န်ဆောင်မှု ကိုမ ဖြည့်ဆည်း ပါက ဖောက် သည်တစ် ဦး ၏ တိုင်ကြား ချက် ရှိပါက ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ကုန် သည်တစ် ဦး လျှင် ၅ ယွမ် ပေး ရမည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:37games ဒု ဥက္က president ္ဌ ဟောင်း သည် Bytedance တွင် Ecological Strategy ၏အကြီးအကဲ အဖြစ် ပါဝင် ခဲ့သည်